ဒင်ဂိုးခွေးရိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Dingo at Glen Helen Gorge, NT
Distribution of the dingo: dingoes south of the dingo fence (black line) may haveahigher prevalence of hybridisation
ဒင်ဂိုးခွေးရိုင်း (Dingo)၏ သိပ္ပံအမည်မှာ ကဲနစ် လူးပတ်စ် ဖြစ်သည်။ ဩစတြေးလျတွင် တွေ့ရသည့် ခွေးတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဩစတြေးလျခွေးရိုင်းဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။ အသွင်သဏ္ဌာန်မှာ ဝံပုလွေနှင့် ဆင်သည်။ ဒင်ဂိုး၏နားရွက်သည် တိုပြီး ထောင်နေသည်။ အမြီးမှာ အမွေးဖွားသည်။ အရောင်အသွေးမှာ နီကြန့် ကြန့် ညိုတိုတို ဖြစ်၏။ ဒင်ဂိုးသည် အခြားမည်သည့်သတ္တဝါကိုမျှ ယုံကြည်လေ့မရှိကြပေ။ ရဲရင့်ကြမ်းကြုတ်ပြီး အလွန်ပါးနပ်သည်။ သို့ ရာတွင် ငယ်စဉ်ကတည်းက မွေးမြူထားပါက အလွန်ယဉ်ပါးသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒင်ဂိုးသည် သားပိုက်ကောင်များကို အဓိကရှာဖွေစားသောက်လေ့ရှိသည်။
↑ Greig၊ K; Walter၊ R; Matisoo-Smith၊ L (2016)။ "21–Dogs and People in South East Asia and the Pacific"။ in Marc Oxenham; Hallie Buckley (eds.)။ The Routledge Handbook of Bioarchaeology in Southeast Asia and the Pacific Islands။ Oxford UK: Routledge။ pp. 471–475။ ISBN 9781138778184။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Jackson၊ Stephen; Groves၊ Colin (2015)။ Taxonomy of Australian Mammals။ CSIRO Publishing, Clayton, Victoria, Australia။ pp. 287–290။ ISBN 9781486300136။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Meyer, F.A.A. (1793)။ Systematisch-summarische Uebersicht der neuesten zoologischen Entdeckungen in Neuholland und Afrika: nebst zwey andern zoologischen Abhandlungen။ Dykischen, Leipzig။ pp. 33–35။ refer page 34. Quote: "Man weiß nicht, ob er die einzige Hundeart in Neusüdwales ist, und ob er auch noch wild sich vorfindet, indeß scheint er bis jetzt noch wenig von seinem wilden Zustande verloren zu haben; auch hat man noch keine Abarten von ihm entdeckt." Translation: "It is not known if it is the only dog species in New South Wales, and if it can also still be found in the wild state; however, so far it appears to have lost little of its wild condition; moreover, no divergent varieties have been discovered"
↑ Smith 2015, pp. xi–24 Chapter 1 - Bradley Smith
↑ မောင်ဝင်းနိုင်၏ တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့် တိရစ္ဆာန်များ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒင်ဂိုးခွေးရိုင်း&oldid=715379" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။